Kooxda tifaftirka Thermorecetas - Cooks with Thermomix | Xeerarka ThermoRecipes
Thermorecetas waa hogaaminaya baloog ku saabsan cuntada sida loo sameeyo Thermomix gudaha Isbaanishka iyo mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan heerka jikada guud ahaan. Waa goob kulan maalinle ah oo loogu talagalay dhammaan kuwa jecel karinta guud ahaan iyo gaar ahaan dhammaan kuwa isticmaala Thermomix.
Webka bilaabay 2010 Tan iyo markaa markaa maalin kasta waxaan daabacnaa hal (ama dhowr) cuntooyinka asalka ah si qof walba uu ugu sameyn karo jikadiisa. Waxaan haynaa cuntooyin noocyo kala duwan leh, oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka oo ku habboon dhammaan heerarka, laga bilaabo diyaargarowga aadka u adag illaa kuwa ka fudud ee lagu sameyn karo wax ka yar 30 daqiiqo iyo aqoon aasaasi ah oo aad u aasaasi ah.
Sidoo kale waxaan soo bandhignay dhowr buug sida aad ku arki karto qaybtaan. Xilligan la joogo waxaan haynaa 2 buug oo lagu daabacay Anaya kuwaas oo si aad ah u iibinaya waxaan sidoo kale soo saarnay buugaag dhowr ah oo qaab digital ah sida buugga Muuji cuntada sida loo sameeyo wax ka yar 30 daqiiqo. Waxaan sidoo kale la shaqeynay NGO sameynta buug midnimo si looga caawiyo quudinta kuwa aadka ugu baahan.
Haddii aad rabto inaad aragto dhammaan cuntooyinka, hadda waad ku sameyn kartaa adoo galaya qaybta cuntada sida aadka loo dalbado ama ku jira cuntooyinka lagu dalbado mawduuc. Waxa kale oo aad ka arki kartaa inta kale mawduucyada aan wax ka qabanno bogga mahadsanid qaybteenna qaybta.
Dhammaan cuntooyinka ka muuqda Thermorecetas waxaa diyaariyey kuwa wax karsada. Iyagu waa nafta degelkan waxayna muujiyaan awooddooda iyo waaya-aragnimadooda sida cunto kariye kasta oo ka mid ah suxuunta ay sameeyaan. Qeybtaan Waxaan kuu soo bandhigeynaa kooxdayada tifaftirka oo dhan si aad u ogaatid oo waxaad ka dareemaysaa degelkan guriga. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad hadda nagu soo biirto waad sameyn kartaa buuxinta foomkan oo markii aad dhamayso waan kula soo xidhiidhi doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Magacaygu waa Irene, waxaan ku dhashay Madrid waxaan haystaa shahaado ku saabsan tarjumaada iyo tarjumaada (inkasta oo maanta aan ka shaqeeyo aduunka iskaashiga caalamiga ah). Waqtigan xaadirka ah, waxaan ahay isku-duwaha Thermorecetas.com, oo ah baloog aan muddo dhowr sano ah iskaashanayay (in kasta oo aan xilli dhow daacad raaci jiray). Halkan waxaan ku soo helay meel cajaa'ib leh oo ii oggolaatay inaan la kulmo dad waaweyn oo aan ku barto tiro aad u tiro badan oo ah habka cuntada iyo tabaha. Jacaylka aan u qabo cunto karinta wuxuu ka yimaadaa markii aan yaraa markii aan hooyaday ka caawiyey cunto karinta. Gurigayga dhexdiisa, suxuunta adduunka oo dhan ayaa had iyo jeer la diyaariyey, tanina, oo ay weheliso jacaylkayga weyn ee socdaalka qalaad iyo wax kasta oo la xiriira adduunka, ayaa maanta ka dhigtay mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aan xiiseeyo. Xaqiiqdii, waxaan ka bilaabay adduunka wax qorista dhowr sano ka hor boggeyga wax karinta ee Sabor Impression (www.saborimpresion.blogspot.com). Goor dambe ayaan la kulmay Thermomix, waanan ogaa inuu saaxiibkeyga weyn ku noqon doono jikada. Maanta ma qiyaasi karo karinta la’aanteed.
Magacaygu waa Ascen waxaanan haystaa shahaadada Xayeysiinta iyo Xiriirka Dadweynaha. Waxaan jeclahay inaan karsado, sawir qaado oo aan ku raaxeysto afarteyda yaryar. Bishii Diseembar 2011 aniga iyo qoyskeygu waxaan u guurnay Parma (Talyaaniga). Halkan waxaan ku sii wadaa samaynta suxuunta Isbaanishka laakiin waxaan sidoo kale diyaarsadaa cunnooyinka caadiga ah ee waddankan ka jira, gaar ahaan gobolka Parma - Parmesans waxay ku faantaa inay tahay "dooxada cuntada" iyo gogosha gastronomic ee Talyaaniga ... -. Waxaan isku dayi doonaa inaan kuu soo gudbiyo dhaqankan cunnada ah, dabcan, had iyo jeer Thermomix-keena ama Bimby, sida Talyaanigu dhaho.
Waxaan ku dhashay Asturias sanadku markuu ahaa 1976. Waxaan ku bartay Coruña Farsamada Ganacsiga iyo Waxqabadyada Dalxiiska hadana waxaan ka shaqeeyaa anigoo ah wacyigaliye dalxiis oo ku yaal gobolka Valencia Anigu waxaan ahay xoogaa muwaadin adduunka ah waxaanan ku sitaa shandadayda sawirro, xusuusno iyo cuntooyin halkan iyo halkan ka ah. Waxaan ka tirsanahay qoys xilliyada fiican, kuwa xun iyo kuwa xunba, ku kala wareegaan miiska, sidaa darteed tan iyo markii aan yaraa jikada ayaa noloshayda joogtay. Laakiin shaki la'aan hamidaydu way sii kordhaysay imaatinka Thermomix ee gurigayga. Kadib waxaa yimid abuuritaanka blogka La Cuchara Caprichosa (http://www.lacucharacaprichosa.com). Waa jacaylkayga kale ee weyn xitaa haddii aan haysto in yar oo laga tegey. Hadda waxaan ka mid ahay kooxda cajiibka ah ee Thermorecetas, oo aan ku kaashado tifaftire ahaan. Maxaan kale oo ka sii rajeyn karaa haddii hamidaygu qayb ka yahay shaqadayda iyo shaqadayda hamiday?
Waxaan ku bilaabay hiwaayadeyda xiisaha leh ee dubista tan iyo da'da 16 jir, tan iyo waqtigaasna ma joojin akhriska, baaritaanka iyo barashada. Waxay igu ahayd caqabad aniga inaan naftayda si buuxda ugu huro iyada iyo helitaan dhab ah oo aan ku haysto Thermomix jikada. Way ka raaxo badan tahay in la sameeyo cunnooyin sax ah waxayna ballaarinaysaa aqoontayda ku saabsan cunto karinta, caqabad igu ah iyo inaan awood u yeesho inaan sii wado barashada cuntada sida fudud loo abuuro
Waan jeclahay karinta. Oo qor. Marka maxaa kafiican barta wax lagu karsado? Thermorecetas wuxuu isku daraa shaqadeyda iyo hamigeyga. Taasi waa sababta aan kuugula wadaagayo cuntooyinkeyga ugu fiican, oo lagu sameeyay maaddooyinka lagama maarmaanka ah, iyo sidoo kale xamaasadda si aan kuugu jeclaado iyaga.
Magacaygu waa Silvia Benito oo ay weheliso Elena waxaan bilaabay boggan 2010. Karinta iyo gaar ahaan Thermomix waa hamigeyga weyn waana muujinayaa. Si tartiib tartiib ah ayaan u korayay, anigoo wax u baranaya qaab is-baray; takhasuskaygu waa macmacaan .... yum yum yum.
Magacaygu waa Elena mid ka mid ah hamidayda ayaa ah cunto karin, laakiin gaar ahaan dubista. Tan iyo markii aan haystay Thermomix, hamigan ayaa koray oo mashiinkan cajiibka ahi wuxuu noqday wax muhiim u ah jikadahayga.
KU SALAYSAN NOLOSHA! Dhowr sano ka hor waxaan bilaabay inaan xiiseeyo dunida caloosha iyo sida ay ugu horumartay jiko kasta. Aniga, oo furay kaliya weelasha si aan ugu rido microwave-ka taasoo ka dhigaysa aasaaska cunnadayda. Thanks to a blogger caan ah, waxaan bilaabay isticmaalka jikada in ka badan kaliya furitaanka qaboojiyaha iyo qabsashada wax kasta. Dhowr sano ka dib markaan kaligey hawlgalo, marka laga reebo mararka qaarkood qalabka guriga, waxaan soo qaatay robot caan ku ah jikada oo aan ku horumariyo inta badan cuntooyinka aan ku soo bandhigo kanaalka oo isticmaalkiisa maalin kasta iga yaabiyo. Inbadan sidaa darteed anigu ma doonayo inaan joojiyo wadaagistiisa. SOO DHAWEYN! In kasta oo aan jecelahay guud ahaan karinta, sanadaha qaarkood waxaan ku sameeyay xoogaa isbeddel ah hab-dhaqankayga cunidda sababtuna ay tahay bilowga qaab nololeed ku saleysan isboortiga iyo jir dhiska. Qaar badan oo ka mid ah cuntooyinka aan soo saaro waxay ku saleysan yihiin falsafadda cunista waxaan runtii u baahanahay oo ku saleysan xudduudaheena iyo baahiyahayaga, waxaan ku siineynaa waxyaabo lagu daray iyo alaabooyin aan caafimaad ahaan u fiicnayn sida noocyada waaweyn mararka qaarkood noo iibiyaan. Waxay ku saabsan tahay la qabsiga cuntooyinka adoo bedelaya qaar ka mid ah maaddooyinka kuwa kale oo ka sii fiicnaanaya (sonkorta loogu talagalay macaaneyaasha dabiiciga ah ee caafimaadka leh sida stevia ama qamadiga oo dhan halkii laga kari lahaa kuwa la safeeyey).
Cunto karis iyo xirfad. Tan iyo markii aan bilaabay isticmaalka Thermomix sanado badan ka hor waxaan gebi ahaanba ku kala maqnayn jikada ... iyo sanado badan oo soo socda! Thermorecetas waxaan ku daabacaa cuntooyinkeyga ugu wanaagsan ee aan ku caawiyo dhamaan dadka ka bilaabaya jikada si ay u helaan sida ugu fiican mid kasta oo iyaga ka mid ah. Ma aqrinaa?